Manao Hetsi-panoherana Amin’ny Fisian’ireo Toby Miaramila Ao Anatin’ny Sisintaniny ireo Bielorosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2015 2:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Italiano, English
Tovolahy, manao ny lobaka nentim-paharazana Bielorosiana, mitazona takelaka, manohitra ny politikan'i Poutine momba ny fanitàrana ara-tafika, eo anoloan'ny vehivavy iray miaraka amin'ny takelaka mivaky hoe “Ndeha misidìna mody!”, nandritry ny hetsi-panoherana ny amin'ny fametrahana ireo tobim-pamaharan'ny tafika an-habakabaka Rosiana any Bielorosia. Sary avy tamin'i Alyaksey Stalyarou ho an'ny Demotix.
Ny fivoriana ny 4 Oktobra no fahatelony namoriana ireo olompirenena manohitra ilay lazaina ho famindràna ny tobim-pamaharan'ny tafika an-habakabaka Rosiana ao amin'ny tanàna Bielorosiana, Babruysk. Kanefa, nanana hafatra nifangaro ilay hetsika: tsy ny resaka fisian'ny miaramilan'i Rosia ao Bielorosia ihany no fotokevitra navoitra, fa ihany koa ny fifandanjan'ireo fifidianana ho avy (mampametra-panontaniana) ary ny rivotra politika tsy tsara loatra ho an'ireo hery mpanohitra rehetra ao amin'ny firenena (olana saro-bahàna).
Olompirenena dimanjato teo ho eo, nirongo saina sy takelaka, no nifamory tao afovoan'i Minsk ny Sabotsy hariva. Voaangona ireo sonia natao tamin'ilay fanangonan-tsonia hanoherana ny tobim-pamaharana Rosiana. Ankoatra ilay toby miaramila ho teboky ny fifanolanana, amin'ny ankapobeny, hita ho vonona hitaraina amin'ny fitsabahan'i Rosia amin'ny zavatra rehetra ireo mpanao hetsi-panoherana, ary naneho fanohanana ho an'ilay mpifanila vodirindrina aminy akaiky indrindra, Okraina.
Hetsi-panoherana ny tobim-pamaharan'ny tafika an'habakabaka'i #Rosia any #Minsk miaraka amin'ireo saina fotsy-mena-fotsy an'i #Bielorosia:
Minsk izao! #tsyMilaRosianaAoBielorosia
Hetsi-panoherana manohitra ireo tobim-pamaharan'ny tafika Rosiana.
Araka ny tatitra avy tamin'ny Charter97, nanipika ilay olo-malaza ao amin'ny mpanohitra, Mikalai Statkevich, hoe “satria tsy nisy hetsika tahaka izany natao mihitsy teto Minsk dimy taona izay, efa zavatra iray aloha izany ny fanaovana azy eto.” Yury Hubarevich, Filoha Lefitry ny hetsika ‘Ho an'ny Fahalalahana!’ nisisika hoe “mety hidina an-dalambe ireo Bielorosiana roa alina” raha hafindra tokoa any Bielorosia ny tobim-pamaharan'ny tafika Rosiana..
Tsy misy toby famaharana—tsy misy ady! (sary: “Mahatonga anay ho lasibatra ny fisian'ny tobim-pamaharan'ny tafika Rosiana.!”)
Nosoratany tamin'ny teny Rosiana mihitsy io, amin'izay hahazo resaka tsara ny “mpifanila vodirindrina” 🙂 tsy haiko hoe iza io lehilahy io, fa manohana azy aho. (sary: “Ataovy any am-b***nareo any ireo toby ireo!”)
Ao amin'ny Aterineto, nifanindran-dàlana tamin'ireo tafiotra nitsitaitaika tao amin'ny Twitter ilay hetsika, nampiasa ny tenifototra #noRussianBaseinBelarus, miaraka amin'ireo mpampiasa media sosialy naneho ny fahitàn'izy ireo ny raharaha. Nalaza sy lasa fampiasa tao Bielorosia ilay tenifototra, indrindra ny andro nanaovana ilay fifamoriana.
I support all peacefull cooperation but not this violation of the constitution. #noRussianBaseinBelarus
Manohana ny fifanarahana milamina rehetra aho fa tsy io fanitsakitsahana ny lalàmpanorenana io.#noRussianBaseinBelarus
This is not a good idea to put rusian aviation military in Bielorus, so
Tsy hevitra tsara ny hametrahana tob'ny tafika an-habakabaka rosiana any Bielorosia, araka izany
Tsy tia an'i Gomel ho lasa Donetsk aho!
Ny farany, nipoitra ny polisy sy nanao fitànana an-tsoratra hoe hetsika famoriam-bahoaka tsy nahazoana fahazoan-dàlana ilay fifamoriana, nalainy ny anaran'ireo mpitarika ny mpanohitra izay nikarakara ilay hetsi-panoherana.
Amin'izao ao Minsk – miezaka ny tsy mamela ireo mpandray fitenenana ny polisy. Mitohy ny hetsika #noRussianBaseinBelarus pic.twitter.com/53PNHeLLkT MT via @svaboda
Nanao fitànana an-tsoratra ireo polisy ary nitsofoka nanoloana ireo mpandray fitenenana.
Nandray fanapahan-kevitra ho famahàna olana ho alefa any amin'ny governemanta Bielorosiana miaraka amin'ny ‘main levée‘ (fampitsaharana ny hetsika), ireo mpandray anjara amin'ilay fifamoriana. Ankoatra izany, napetraka tao amin'ny fivoriana ny hetsika vaovao iray ‘Ho an'ny Fanjakana sy fahaleovantenan'i Bielorosia’, niaraka tamin'ny ‘main levée’ avy amin'ireo nanatrika ihany koa. Poety sy olo-malazan'ny mpanohitra, Uladzimir Nyaklyayeu, no voafidy ho Filohan'ilay hetsika.
Mety ho iray tsy fahita firy amin'ireo fanehoankevitry ny mponina avy eo an-toerana izay avela hatao mialohan'ny fifidianana ho avy any Bielorosia ilay hetsi-panoherana ny tobim-pamaharan'ny tafika an'habakabaka, fifidianana izay toa hita sahady ho azon'ilay filoha amperinasa, Alyaksandr Lukashenka. Nahitàna hetsi-panoherana lehibe sy hery famoretana mafy ireo fifidianana teo aloha, niaraka tamin'ny fisamborana sy fampidirana am-ponja ireo lohandohan'ny mpanohitra maro.